Xafiiska arimaha haweenka DDSI oo soo bandhigay dood-cilmiyeed. - Cakaara News
Xafiiska arimaha haweenka DDSI oo soo bandhigay dood-cilmiyeed.
Jigjiga(CN)talaado, 8da December, 2015, Xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI ayaa soo diyaariyay dood cilmiyeed ku saabsan arimaha horumarka haweenka, isbadalka koboca dhaqaalaha, haweenka deegaanka iyo ahmiyada ay leedahay 29ka hidaar oo ah maalinta qoomiyadaha, shucuubta iyo dadyawga dalkeena itoobiya taasi oo markii 10aad maalinta barito ah laga xusayo dhamaan dalkeena itoobiya.
Dood cilmiyeedan ayaa waxaa ka soo qabtalay masuuliyiinta iyo shaqaalaha xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI,masuuliyiinta iyo shaqaalaha xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta ee maamulka magaalada jigjiga iyo waliba ururada haweenka iyo dhalinyarada ee maamulka magaalada jigjiga.
Dood cilmiyeedkaa oo lagu qabtay hoolka shirarka ee xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI ayaa waxaa ugu horayntii ka hadashay ku simaha wasiirka haweenka iyo caruurta DDSI marwo saynab xaaji aadan waxayna ka warbixisay soonyaalkii taariikheed ee uu soo maray deegaanku gaar ahaan dhinaca arimaha haweenka. Taasi sharax dheer ka bixisay is bar bar dhiga xaaladihii dhibaatooyinka hagar daamooyinkii hore u soo curyaamiyay arimaha haweenka ee duud siyay xuquuqihii iyo xaqii arimaha horumarka haweenka ee maamuladii boqortooyada iyo kalidii taliskii mingisti iyo ka faa’iidaysiga fursadaha horumarka ee ay hadda haystaan guud ahaanba haweenka itoobiya gaar ahaana kuwa deegaanku.
Dhankeeda waxaa ka hadashay furitaankii dood cilmiyeedkaasi madaxa xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta ee maamulka magaalada jigjiga marwo faaduma maxamed yuusuf oo ka warbixisay ahmiyada ay leedahay dood ciliyeedan ku qotonta horumarka arimaha haweenka isbadalka koboca dhaqaale ee haweenka iyo ahmiyada ay leedahay xuska 29ka hidaar, guulaha horumarineed ee ay haweenka iyo guud ahaanba qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya u soo hosay 29ka hidaar.
Dood ciliyeedkan ayaa waxa laga qorfayndoonaa mudada uu socto marxaladihii iyo isbadalkii uu deegaanku soo maray gaar ahaan dhinaca arimaha haweenka amiyada ay leedahay xuska 29ka hidaar iyo sii xoojinta hawlaha horumarka haweenka iyo dhalinyarada.